घरमै वर्कआउट र ध्यान गर्न अदितीको सल्लाह – Ktm Dainik
घरमै वर्कआउट र ध्यान गर्न अदितीको सल्लाह - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
. इन्स्टामा २० लाख फ्लोअर्स कमाउने पहिलो सेलिब्रेटी बनिन् अदिती
. फ्यानहरूको मन जितेको अदितीको तस्विर
. मुम्बई पुगेर बिकिनीमा देखिइन अदिती (तस्विरहरू)
. कोरोना खोप लगाउन मुम्बइ पुगिन् अदिती !
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: शुक्रवार, असार ५ २०७७ १०:०४:५९